အစစ်အမှန်ဖြစ်သော Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက် - Japan Scissors
အသစ် 2021 ရောင်းအားအသစ်
ပင်မစာမျက်နှာ / Jaguar ကပျကြေး
Jaguar Jay2ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာစေခြင်း
Jaguar ကပျကြေး $ 249.00 AUD
Jaguar ပန်းရောင် Pre Style Ergo ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်စက်
Jaguar White Line ဖဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး
Jaguar ကပျကြေး $ 179.00 AUD
Jaguar Jay2ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေး
Jaguar ကပျကြေး $ 199.00 AUD
Jaguar Jay2Triple ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းအစု
Jaguar ကပျကြေး $ 299.00 AUD $ 399.00 AUD
Jaguar ပန်းရောင် Pre Style စတိုင် Ergo ဖြတ်တောက်ခြင်း၊
Jaguar ကပျကြေး $ 249.00 AUD $ 399.00 AUD
Jaguar White Line Satin Plus ပါးလွှာသောကတ်ကြေး
Jaguar Pre Style လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးချွတ်ထားပါ
Jaguar ပန်းနုရောင် Pre Style Ergo ပါးလွှာသောကတ်ကြေး
Jaguar ကပျကြေး $ 149.00 AUD
Jaguar Pre Style သည် Relax P ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းအစု
Jaguar အနုပညာ MYSTIC ROSE ကတ်ကြေး
Jaguar ကပျကြေး $ 279.00 AUD
Jaguar Pastell Plus Viola ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး
Jaguar Pastell Plus Candy ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး
Jaguar Pre-Style Relax လက်ဝဲလက်ပါးလွှာကတ်ကြေး
Jaguar White Line Satin Plus ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး
ကျနော်တို့မကြာခဏ "ဖြစ်ကြသည် Jaguar ကတ်ကြေးကဘယ်ကောင်းလဲ? " ဟုတ်ပါတယ်။ Jaguar ကတ်ကြေးများကိုဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ပြုလုပ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ် Jaguar ကတ်ကြေးနဲ့သူတို့ရဲ့ Jay2 နဲ့ Pre Style collection ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးများဆုံးကတ်ကြေးအချို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အများစုအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Jaguar ကတ်ကြေးများသည်၎င်းတို့အားတတ်နိုင်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကြယ် ၅ ပွင့်ပေးသည်။ အများဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Shears သြစတြေးလျနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ White Line ကတ်ကြေးများဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်သင့်သနည်း Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေးလား။
Jaguar ဂျာမနီ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်လုပ်ငန်းအတွက်ဥရောပ၏ရှေးအကျဆုံးကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Jaguar သြစတြေးလျမှာဒေါ်လာ ၁၂၅ ကနေ ၁၃၀၀ ကြားစျေးတွေကျတယ်
အဆိုပါ Jaguar စီးရီးများပါဝင်သည်:2ဇေ ၂, အကြိုပုံစံ, အဖြူရောင်လိုင်း, အနက်ရောင်လိုင်း နှင့် ရွှေလိုင်း မော်ဒယ်များ
အခြေခံမော်ဒယ်များက bevel အစွန်းဓါးကိုအသုံးပြုသည်
အဆိုပါ Jaguar ပါးလွှာသောကတ်ကြေး V-shaped အံသွားကိုသုံးပါ
အဆိုပါ Jaguar ပါးလွှာသောမော်ဒယ်များ texturizing နှင့်ပါးလွှာပါဝင်သည်
Black Line နှင့် Gold Line မော်ဒယ်များသည်တိကျသောခုံးအနားသတ်ဓါးကိုအသုံးပြုသည်
Solingen ergonomics သည် Offset နှင့် ချီစက်ကတ်ကြေးလက်ကိုင်
Jaguar issစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ လူကြိုက်များမှ Jaguar ဂျေး ၂၊ JaguArt, Jaguar ဖို့, Pastell Pluss ကတ်ကြေး Jaguar Pre Style Ergo သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
လူကြိုက်အများဆုံး Jaguar ကပျကြေး
အတွင်း Jaguar ကတ်ကြေးများစွာရှိသည်။ Jay 2, Pre Style နှင့် White Line ကဲ့သို့သော collection များစွာရှိသည်။
အဆိုပါ Jaguar Jay2ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများအစုံသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်သြစတြေးလျ (AUS) နှင့်နယူးဇီလန် (NZ) တို့တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။
Pre Style Ergo နှင့် Pre Style Relax Jaguar ကျား၊ မ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ အရွယ်အစား ၅ လက်မ၊ ၅.၅ လက်မ၊ ၆ လက်မ၊ ၆.၅ လက်မအပြား ရှိ၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းအခြေအနေများစွာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်စွယ်စုံဖြစ်သည်။
အကြောင်းပို Read Jaguar
၏သမိုင်း Jaguar ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ကတ်ကြေးပေးသွင်း
1932 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ကတည်းက Jaguar ဂျာမန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဆံပင်ညှပ်ကိရိယာများကိုပေးသည် Jaguar သြစတြေးလျအတွက်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှု။
သင်ကတ်ကြေးတစ်ချိန်တည်းရရှိနိုင်စေရန်သေချာစေရန်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးအာမခံလမ်းညွှန်ချက်များဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ Jaguar Solingen သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတစ်စုံစီကိုလုပ်ငန်းပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ဖြင့်လက်မှုတစ်ခုစီသည်နောက်တစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းမွန်စေသည်။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများ၊ တိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောကတ်ကြေးများ၊ အော့ဖ်လပ်နှင့်ဂန္ထဝင်ကတ်ကြေးများ၊
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများပါဝင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ကတ်ကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ \_ t Jaguar အားလုံးရှိပါတယ်!
ဘယ်လိုဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ Jaguar ထုတ်လုပ် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ စလင်ဂင်မြို့မှအထူးဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများ။ အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် Jaguar ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှတစ်ဆင့်ကတ်ကြေး (Solingen)၊ ဒီမှာကတ်ကြေး!
စာရင်းအပြည့်အစုံ Jaguar ကတ်ကြေးပုံစံများ
ဤတွင်အားလုံးအပေါငျးတို့သကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုဖြစ်ပါတယ် Jaguar စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်ကတ်ကြေးမော်ဒယ်များ။ တစ်ခုချင်းစီကို Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးပုံစံသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ဆံပင်ညှပ်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။
Jaguar Jay2& Models
မော်ဒယ်နံပါတ် စျေးနှုန်း ဖေါ်ပြချက်
ဂျက် JAY2 SET $300 Jay2ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းအစု
JAG J5055 & JAG J5060 $150 Jay2ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး
ဂျက် J5075 $150 Jay2ပါးလွှာသောကတ်ကြေး
Jaguar ပုံစံမော်ဒယ် PRE
JAG 82650, JAG 82655 နှင့် JAG 82660 $ 150-250 Pre Style သည်အတုဒီဇိုင်း၊ ရိုးရာဖြတ်တောက်ခြင်းခံစားမှုနှင့်အရောင်တင်ခြင်းနှင့်အတူကတ်ကြေးကပ်ခွာများ။
JAG 83355 $ 150-250 သွားပုံစံ (၂၈) လုံးပါ ၀ င်သောကတ်ကြေးကပ်ပါးမှုပုံစံ ၅.၅ လက်မ Ergo ။
JAG 82750, JAG 82755 နှင့် JAG 82760 $ 150-250 Pre style ပုံစံသည်အနားယူထားသော offset ဒီဇိုင်းကိုကုတ်ညှပ်ပြီးပွတ်ပြီးအနားယူသည်။
JAG 83455 $ 150-250 သွားပုံစံ ၂၈ ခုပါသောပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကို ၅.၅ လက်မလျှော့အနားယူထားသည်။
JAG 823525 နှင့် JAG 823575 $ 150-250 Left Handed (LEFTY) အကြိုစတိုင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုအနားယူပါ။
JAG 839525 $ 150-250 လက်ဝဲဘက် (ဘယ်) လက်ချောင်း ၃၉ ခုပါသောပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုစတိုင်ကျစွာအနားယူပါ။
Jag 0350, JAG 0355, JAG 0360, JAG 10365, JAG 10370 $ 150-250 Jaguar White Line Satin ကတ်ကြေးများသည်ရိုးရာခံစားမှုရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် micro-serrated blade နှင့်ဖဲအချောများပါဝင်သည်။
JAG 3453 နှင့် JAG 3455 $ 150-250 White Line ဖဲမှိုပါးလွှာစေတယ်32 သို့မဟုတ် 27 အံသွားဖြစ်စေနှင့်အတူ။
JAG 3350 နှင့် JAG 3360 $ 150-2550 White Line Satin သည်နှစ်ဖက်စလုံးပိုမိုပါးလွှာသည် 28 အံသွားသို့မဟုတ် 30 အံသွားဖြစ်စေနှင့်အတူ။
JAG 4750, JAG 4755 နှင့် JAG 4760 $ 150-250 White Line Satin Plus ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။
JAG 3050 နှင့် JAG 3065 $ 150--250 White Line Satin Plus သည်အံသွား ၄၀ (သို့) သွား ၄၆ ခုနှင့်ပါးလွှာသည်။
JAG 2150, JAG 2155 နှင့် JAG 2160 $ 150-250 White Line Satin Plus E သည်ဒီဇိုင်းဖြတ်သောကတ်ကြေးများကိုညှိပေးသည်။
JAG 3865 $ 150-250 White Line Satin Plus E သည်ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုညှိပေးသည်။
JAG 4350 နှင့် JAG 4355 $ 200-300 White Line Charm သည်ပွတ်သပ်ပြီးသုတ်လိမ်းထားသောဆံပင်ညှပ်သောကတ်ကြေးများ။
JAG 36555 $ 200-300 White Line Charm သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါးလွှာသောကတ်ကြေးများ။
JAG 4350 နှင့် JAG 4355 $ 200-300 White ကလိုင်း Smart features တွေ Jaguar'' ထူးခြားသော Ergonomics ရိန်းလက်ကိုင်ဒီဇိုင်း။
JAG 43155 $ 200-300 White Line Smart သည် Jaguarပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံး။
JAG 46525 နှင့် JAG 46575 $ 200-300 Jaguarလူကြိုက်များသော JP 10 (JP10) သည်စီးပွားရေးအရဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ရန်ကတ်ကြေးများကိုညှိပေးသည်။
JAG 46526 $ 200-300 Jaguarလူကြိုက်များသော JP 10 (JP10) သည်စီးပွားရေးအရဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုညှိပေးသည်။
JAG 1355, JAG 1360, JAG 1365 နှင့် JAG 1370 $ 200-350 JaguarSilver ICE ဖြတ်တောက်နိုင်သောကတ်ကြေးများတွင်ရိုးရာဒီဇိုင်းနှင့်အချောသပ်စွာပြုလုပ်ထားသည်။
JAG 3150 နှင့် JAG 13165 $ 200-350 Silver Ice ပါးလွှာသောကြေးကပ်များတွင်သွား ၄၀၊ သွား ၄၆ ခုပါရှိသည်။
JAG 2950, ​​JAG 2955 နှင့် JAG 2960 $ 200-350 Sterling ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးသည်ရိုးရာခံစားချက်ရှိသည်။
JAG 3950 $ 200-350 အဆိုပါ Sterling ပါးလွှာကတ်ကြေးတစ်ခု ergonomic လက်ကိုင်နှင့်သွား 40 ရှိပါတယ်။
JAG 4752-1, JAG 4752-2, JAG 4752-3 $ 200-350 Pastell Plus သည် Viola, Lava နှင့် Candy အရောင်များနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးဆိုင်ရာကတ်ကြေးများဖြစ်သည်။
JAG 3054-1, JAG 3054-2 နှင့် JAG 3054-3 $ 200-350 Pastell Plus ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများတွင်သွား ၄၀ နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလက်ကိုင်ရှိသည်။
JAG 3550 နှင့် JAG 3565 $ 200-350 အဆိုပါ Jaguar CM ပါးလွှာသူများအနေဖြင့်သွားနှင့်အံသွား ၄၀၊ ၄၆ ခုရှိပြီး ၅ လက်မနှင့် ၆.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်။
JAG 49525 နှင့် JAG 49575 $ 200-350 Left-Handed (LEFTY) JP 10 ဖြတ်တောက်သောကတ်ကြေးများသည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
JAG 49526 $ 200-350 Left-Handed (LEFTY) JP 10 ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသည်အံသွား ၃၈ ခုနှင့် ၅.၂၅ လက်မအရွယ်ရှိသည်။
ဂျက် 45255-12 $ 200-300 အဆိုပါ Jaguar အနုပညာ (Jaguart) မထင်မှတ်သောကြောင့်ထူးခြားသောအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းများ။
ဂျက် 45255-23 $ 200-300 အဆိုပါ Jaguar အနုပညာ (Jaguart) Moonlight ဥယျာဉ်တွင်ထူးခြားသောအရောင်ခြယ်မှုဒီဇိုင်းများပါရှိသည်။
ဂျက် 45255-24 $ 200-300 အဆိုပါ Jaguar အနုပညာ (Jaguart) Sweet Daisy တွင်ထူးခြားသောအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းများပါရှိသည်။
ဂျက် 45255-29 $ 200-300 အဆိုပါ Jaguar အနုပညာ (Jaguart) SPLASH တွင်ထူးခြားသောအရောင်ခြယ်မှုဒီဇိုင်းများပါရှိသည်။
ဂျက် 45255-30 $ 200-300 အဆိုပါ Jaguar အနုပညာ (Jaguart) SUNSHINE တွင်ထူးခြားသောအရောင်ခြယ်မှုဒီဇိုင်းများပါဝင်သည်
JAG 65150, JAG 65155 နှင့် JAG 65160 $ 300-400 Jaguar ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းကတ်ကြေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဂျာမန်သံမဏိ၊ ergonomic ဒီဇိုင်းနှင့်အချောသပ်စွာပြုလုပ်ထားသည်။
JAG 65555 $ 300-400 Jaguar Grace တွင်သွား ၄၀ နှင့် ၅.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်
JAG 70055 နှင့် JAG 70060 $ 300-400 Jaguar FAME ကတ်ကြေး ပရီမီယံသံမဏိကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့်ထူးခြားကောင်းမွန်သောသင့်လျော်သောထောင့်ထောင့်ကွင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။
ဂျက် 70055-2 $ 300-400 Jaguar Fame ကန့်သတ်ထုတ်ဝေ ROSE GOLD ။
JAG 70575 $ 300-400 Jaguar Fame ပါးလွှာသောကတ်ကြေး သွား ၄၂ လုံးနှင့် ၅.၇၅ "အရွယ်အစားရှိသည်။
JAG 9250, JAG 9255 နှင့် JAG 9260 $ 300-400 Jaguar CJ4 (CJ 4) Plus မော်ဒယ်များသည်ထူးခြားသော ergonomics နှင့်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းများဖြစ်သည်။
JAG 92555 $ 300-400 Jaguar CJ4 ပါးလွှာသောကတ်ကြေး သွား ၄၂ လုံးနှင့် ၅.၇၅ "အရွယ်အစားရှိသည်။
JAG 95575 $ 300-400 Jaguar CJ5 (CJ 5) ကတ်ကြေး ငွေလိုင်းစုဆောင်းမှုထဲကအကောင်းဆုံး ergonomics ပါရှိသည်။
JAG 9650, JAG 9655 နှင့် JAG 9660 $ 300-400 Jaguar CJ3 (CJ 3) ကတ်ကြေးများသည်လူကြိုက်အများဆုံး Silver Line ညှပ်များဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ ချွန်ထက်သောဖြတ်ဓါးများနှင့်အဆင့်မြင့်သံမဏိများ။
JAG 96525 $ 300-400 အဆိုပါ Jaguar CM36 ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတွင်အံသွား ၃၆ ခုနှင့်အမြင့်မှ ၅.၂၅ လက်မရှိပြီးအစွန်အဖျားမှကိုင်တွယ်သည်အထိ။
JAG 0150, JAG 0155 နှင့် JAG 0160 $ 300-450
အဆိုပါ Jaguar ပြီးပြည့်စုံသောဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး ရိုးရာဖြတ်တောက်ခြင်းခံစားမှုရှိပြီးအရောင်တင်ထားသောရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
JAG 99525 နှင့် JAG 99575 $ 300-450 လူကြိုက်အများဆုံးလက်ဝဲလက် Jaguar ကတ်ကြေးရရှိနိုင် လက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက် LEFT CJ4Plus (CJ4) ကတ်ကြေးများကို Ergonomically ပုံစံပြုထားသည်။
JAG 99526 $ 300-450 Left-CJ4Plus ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးမှာသွား ၄၀ နဲ့အမြင့်မှ ၅.၂၅ လက်မအရွယ်ရှိပါတယ်။
JAG 26155 $ 600-900 အဆိုပါ Gold Line Lane ကတ်ကြေးအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုများအတွက်ဂျာမန်သံမဏိနှင့်ချွန်ထက်သောဓါးများကိုအသုံးပြုသည်။
JAG 26575 $ 600-900 အဆိုပါ ရွှေလိုင်းလိန်းပါးလွှာ ကတ်ကြေးများတွင်အံသွား ၃၃ ခုနှင့်အရှည်တစ်ခုမှ ၅.၇၅ လက်မရှိသည်။
JAG 29155 နှင့် JAG 29160 $ 600-900 Silence ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များတွင်ပရီမီယံသံမဏိ၊
JAG 29575 $ 600-900 Silence ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများတွင်အံသွား ၃၄ ခုနှင့်လက်ကိုင်လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းရှိသည်။
JAG 28155 နှင့် 28160 $ 600-900 အဆိုပါ ရွှေဝါ Jaguar ကပျကြေးအပြောင်ဆုံးခုံးအနား၊ ပရီမီယံဂျာမန်သံမဏိနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ergonomics ပါရှိသည်။
JAG 28575 $ 600-900 အဆိုပါ Goldwing ပါးလွှာသောကတ်ကြေး34 သွားနှင့် 5.75 "၏အရွယ်အစားပါဝင်သည်။
JAG 27155 နှင့် JAG 27160 $ 600-900 အဆိုပါ Xenox ကတ်ကြေး ergonomics လက်ကိုင်၊ ထူးခြားသောကွေးသောဓါးများပါဝင်ပြီးဂျာမနီတွင်ပြုလုပ်သည်။
JAG 21150, JAG 21155 နှင့် JAG 21160 $ 600-900 အဆိုပါ စိန်အီး Ergonomic ဖြတ်တောက်မှုကတ်ကြေး မုသားစိန်ဖြတ်တောက်သောအရည်အသွေးမြင့်ဂျာမန်သံမဏိ, ချွန်သောခုံးအစွန်းဓါးသွားသုံးပါ။
JAG 21555 $ 600-900 အဆိုပါ Diamond CC39 ပါးလွှာသည် သွား ၃၉ လုံးနှင့်အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မရှိသည်။
JAG 20150, JAG 20155 နှင့် JAG 20160 $ 600-900 Diamond Scissors များသည်အဆင့်မြင့်သံမဏိ၊ ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအနားများနှင့်ရိုးရာလက်ကိုင်ဒီဇိုင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
JAG 20555 $ 600-900 Diamond Thinning Shears တွင်ရိုးရာလက်ကိုင်နှင့်ချွန်ထက်သောပါးလွှာသောသွားများပါရှိသည်။
JAG 24525 နှင့် JAG 24575 $ 600-900 အဆိုပါ လက်ဝဲလက်ကိုင်စိန်အီး (LEFTY) ဖြတ်တောက်သောကတ်ကြေးများသည်ကျွမ်းကျင်သော ergonomics၊ ဂျာမန်သံမဏိများနှင့်စိန်ထက်ပိုမိုပြတ်သားသည်။
JAG 24526 $ 600-900 အဆိုပါ Diamond E လက်ဝဲပါးလွှာသောကတ်ကြေးသွား ၃၉ လုံးနှင့် ၅.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်။
Jaguar အနက်ရောင် LINE & Models
JAG 941525 နှင့် JAG 941575 $ 1200-2000 Vision MC သံမဏိတွင်ထောင့်ကွင်းထောင့်များ၊ အကောင်းဆုံးэрဂonomicsနှင့်အပြောင်ဆုံးခုံးအနားများရှိဂျာမန်ကတ်ကြေးများအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
JAG 971525, JAG 971575 နှင့် JAG 971600 $ 1200-2000 Synergy Design MC သံမဏိသည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဂျာမန်သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ လက်လည်ပတ်လည်ပတ်လက်စွပ်အားတည့်မတ်ပေးပြီးချွန်သောခုံးအစွန်းဓါးများကိုအသုံးပြုသည်။
JAG 97525-1 နှင့် JAG 97575-1 $ 1200-2000 Euro Tech ဒီဇိုင်း MC သံမဏိသည် Micro Carbide ဂျာမန်သံမဏိ၊ ခုံးဓားများနှင့်အမြင့်ဆုံး offset ergonomics ကိုအသုံးပြုသည်။
အပေါ်ကိုးကားနှင့်ပိုပြီးစာဖတ်ခြင်း Jaguar Solingen ကတ်ကြေး